Supported Databases With Havij နဲ့ web site hacking book ~ (IT) ကိုထိုက်
Supported Databases With Havij နဲ့ web site hacking book
Posted by မြွေဖြူ on November 15, 2011 at 8:54pm in Myanmar Hackers Group
Back to Myanmar Hackers Group Discussions
အခုတစ်လော ကျွန်တော်တို့ china မှာ Havij နဲ့ ၀က်ဆိုက်ကို Supported Databases လုတ်တာတော်တော်ခေတ်စားတယ်
ကျွန်တော် database နဲ့ php သင်တုံးကလည်းအဲ့ ဒီ sftware ကို တစ်ခါတစ်လေသုံးရတယ်
web site hack လုတ်ရမယ်အခါအထောက်အကူဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ကတော့ backtrack ပဲကြိုက်တယ် မိုက်တယ် စာဖက်သူတို့လည်း လင်းနစ်းစမ်းသုံးပြီး လုပ်ကြည်ပါ ကျွန်တော်တို့သင်တန်းက ဆရာတွေကိုယ်တိုင်းရေး os ကိုတင်ပေးမယ် သင်တန်းဆရာတွေရေးတဲ့ browser တွေရောပေးမယ် ဟောင်လား
ဒီအကြောင်းကို http://technologyandarchives.blogspot.com/2011/06/sql-injection-tut... ဒီမှာဖက်ကြည်လိုက်နော်
ဒါလေးကတော့pinginfoview တဲ့ ping တွေရဲ့ အတွင်းအကြောင်းကိုကြည်ါရတာပေါ့နားလည်ရင်ဘာတွေလုတ်ရမလဲဆိုတာသိမယ် ntework သမားတွေအတွက်ပါ
ဒါလေးကတော့ ညီလေးတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ websitehacking book လေးပါ attack လုတ်နည်းတွေတော်တော်များများပါဝင်တယ် လုတ်တက်တဲ့ မြန်မာပြည်ကသူတွေအတွက်ကတော့ထူးမခြားနားပါပဲနော်
ကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိသေးလို့ခတ်နေတာ ဒါကို တရုတ်က ငနဲ တစ်ယောက်က ဒီဆိုက်လေးကို ဟက်သွားသေးတယ် အော်အလကားရတဲ့ဟာကိုတောင်မှချမ်းသာမပေးဘူးနောက် us ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို့ လုတ်ရမှာ သူဆိုက်မှာရေးထားတာ please hack my website တဲ့ ကောင်းရောကျွန်တော်လည်းရေးဦမှ
စာအုတ်နဲ့ မတူတူ keylogger ,spy ရှင်းတဲ့ နောက်အဆင်မြင့်ရှင်းတဲ့ဟာလေးပါထည့်ပေးလိုက်တယ်
နောက် script လေးတွေတင်ပေးမယ် အလွယ်ကူဆုံး net tool လေးတစ်ခုရေးမယ်
ကဲ notepad ကိုဖွင့်လိုက်
ဒါလေးကို nettools.bat နဲ့ save လိုက် ကိုယ် network ပြသနာ အနည်းငယ်လောက်ရှိရင် run လိုက် ဒီ ပရှိဂရမ်လေးက ပြန်ပြင်လိမ်မယ်နော်နောက် sever တစ်ခုရေးရအောင်တစ်မျိုးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ တစ်ကယ် sever တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် :p
ping 192.168.1.1 > "%userprofile%\_desktop\_mypings.txt"
ping www.google.com >> "%userprofile%\_desktop\_mypings.txt"
ping 192.168.1.222 >> "%userprofile%\_desktop\_mypings.txt"
ဒါကိုလည်း multipalsever.bat နဲ့ save လိုက် ပြီးရင် run ကြည်လိုက်ပါ စာဖက်သူက script တွေကိုလေ့လာသူဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုပြင်ရေးရမလဲဆိုတာသိလာပါမယ် ကောင်းစွာလေ့လာနိုင်ပါစေ
ဟက်ကြမယ်ဟေ ဟက်မယ် hacking script
รายการ บล็อก Admin Page ကို Crewl လုပ်ရန် ( SQL I...
Wireless အလှူပေးတာ ကာကွယ်ရအောင်
Supported Databases With Havij နဲ့ web site hacki...
Simple Dork SQL Injection
shell c99 DORK
password viewer (using java script)
Page အတုတွေကို ပြန်ဖောက်မယ်
How to MakeaPhishing
hacking video နှင့် Ddos attack tools
Hacking FB's Car Town Social Online Game
Google DORK 2011
Delete Network Printer Remotely
Cyber ware v3.1
Gmail ပတ်စ၀ပ်မသိပဲ သူများအကောင့်ကိုဝင်ကြည့်ချင်တယ်...
စပ်စုတာ ၀ါသနာပါသူများ ဟက်ကာ လုပ်လိုသူများအတွက် နည်...
Gtalk gmail hack တတ်ချင်သူများနဲ့စပ်စုလိုသော သူင...
ပိတ်ထားတဲ့ဆိုဒ်တွေရှောင်ဖွင့်ဖို့ Proxy ဆိုဒ်များ ...
Gtalk မှာပုံတွေအလိုလိုပြောင်းစေတဲ့Gtalk shell
ဘယ်မှာသွားသုံးသုံးအဆင်ပြေနိုင်တဲ့ Gtalk Portableေ...
Phone အတွက်ရော ကွန်ပျုတာအတွက်ပါ စွယ်စုံသုံးလို့ ရတ...
Gmail & Gtalk ထဲမှာ ကိုယ့်ကို သူများက ဘလော့ထားလား ...
Faebook ကို Gtalk လိုပဲ Desktop ပေါ်တင်ချက်ချင်ရင်
Facebook အခုလ 15ရက်နေမှာ ပိတ်တော့မည်ဟာ အတည်ပြု သတင...
Facebook တကယ်ပျက်မလား .? ( Account Password Auto C...
Facebook ပေါ်တွင် ကိုင်ပေါက်လိုက် ပြန်ကောက်လိုက် လု...
Facebook အကောင့်ဖွင့်တော့မယ်ဆို သိထား၊ သတိထားစေချင...
Facebook မှာ ကိုယ့် Profile Page ကို ဘယ်သူ အများဆံ...
Facebook အကောင့် ဖွင့်မရ ပြဿနာတက်ခဲ့သာ် ဖြေရှင်းရန...
Facebook မှာ ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းစာရင်း ကို ဖျောက်ထ...
Youtube နဲ့Facebook ကVideo ကြည့်မရ Flash Player ...
်facebook wall စာမျက် နှာမှာ သူများစာလာရေးမရ အောင်...
facebook ရဲ. Comments နဲ. chatting မှာ ရုပ်ပြောင်ေ...
Easy Dos Attack and Phishing ( Web Page အတုလုပ်ခြင...
DDOS Attack basic
Binary coad အကြောင်းလေ့လာကြမယ်
Autorun virus that steals files withaUSB !!!
art of spectral penetration testing by james codis...
All Password Hacking by sending Mail To Somebody's...
ဟက်ကင်နဲ့ပတ်သတ်လုိ့ ဖတ်ကိုဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ...
မလေးရှားအစိုးရ DBKL Web Vulnerability ( For Knowle...
မိမိ စက်ကို ဘယ်သူသုံးသွားသလဲ ကြည့်ရအောင်
ံ့Hacking ဘယ်က စ ရမလဲ
ပြီးပြည့်စုံသော Hacking Information
Window Guest Account မှ Admin ကို ဖောက်ဖို့
WIFI Password ခိုးနည်းလေး ပေးလိုက်ပါတယ်
SQL အကြောင်းလေး ဖတ်ရအောင် ( Hacker များရဲ့တိုက်ကွက...
How To Spread Your Viruses Successfully Over Inter...
SQL လုံးဝမသိရင် နမူနာအနေနဲ့ ဘယ်လိုဟက်တယ် ?
Rapid Share ကို Premium Accout ဖြစ်အောင်ဟက်မယ်
newbies hacker tutorial (လျို့ဝှက်ချက်လေးများ)
IP Address သိရင် ဘယ်လိုဟက်လို့ရနိုင်သလဲ ?